Mahjong. Tinye ma nwee obi ụtọ site na Emulator.online
Mahjong. MahJong bụ ọgụgụ isi egwuregwu na-achọ a otutu ịta, amamihe na nghọta. Mụta ịkpọ Mah Jong, mee njikọ kachasị mma ma bụrụ nnukwu mmeri.
Mahjong: Etu esi egwu egwu site na nzọụkwụ Step
Playkpọ Mahjong online n'efu, naanị ị ga-eme soro ntuziaka ndị a nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo. Ikwesiri ime kụrụ egwuregwu ma ugbu a ị nwere ike ịmalite ịkpọ otu iberibe ahụ iji kpochapụ ha.
Nzọụkwụ 3. Ndị a bụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", pịa bọtịnụ"Play"ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"ma kwụsị ya, jụọ"enyemaka"ma ọ bụ"Malitegharịa ekwentị"oge obula.
Nzọụkwụ 4. Kpochapu uzo abuo rue mgbe egwuregwu ahuru, na-echeta mgbe niile iwu nke egwuregwu. Na njedebe, ị ga-enwe ike ịdebanye aha gị na kekọrịta ya na netwọk mmekọrịta ozugbo ị gwụchara egwuregwu ahụ.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "Egwuregwu" igwu egwu na map ndi ozo.
Leekwa Iwu Mahjong nke Iwu ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe iwu mba ụwa nke egwuregwu a ma ama.
Gịnị bụ Mahjong?
Mah Jong na-bụ jEgwuregwu nke ndị China na-egwuri egwu nke ndị egwuregwu 4 na ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị atọ ụtọ ma nwee ekele taa. Ọ bụ egwuregwu nke ngụkọta oge, nkà na atụmatụ na ya egwuregwu bụ nnọọ yiri nke domino.
Egwuregwu nwere Iberibe 144 na ndị a nwere akara na akara ndị China, nke na-enye ohere inweta ọtụtụ nchikota dị iche iche. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ mpaghara dị iche iche na-eji ọnụ ọgụgụ dị iche iche.
Ebumnuche ebumnuche nke egwuregwu a bụ ịbụ onye izizi ga - etolite aka dị mkpa nke na - ezute opekempe akara chọrọ. Uru nke aka na-agbanwe agbanwe ma kọwaa ya site na nsogbu nke nchikota ndị mejupụtara ya.
Akụkọ banyere egwuregwu mahjong bụ isiokwu na-arụ ụka n'etiti ndị ọkachamara. Fọdụ na-eche na ọ nwere ihe karịrị afọ 2500 na ndị ọzọ na-ekwu na o sitere na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ nke XNUMX. Otú ọ dị, tupu narị afọ nke XNUMX, ọ dịghị ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme.
Dị ka akụkọ akụkọ China si kwuo, onye ọkà ihe ọmụma China Confucius O so na mbido egwuregwu bọọdụ. Agbanyeghị, enweghị ihe mmụta sayensị na-egosi nke a. Nke a bụ akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ ifo na ọdịnaya ndị a:
Nwanyi mara nma nke owu na-ama biri na ulo nke Eze Wu. Ike agwụla m ịnwụ. Otu ụbọchị ọ malitere ịkpụ ihe oyiyi nke achara na ọdụ́ nke yiri nke okwute domino. Mgbe o mechara, ọ kpọtara ụmụ odibo ya ma soro ha gwuo egwu. Kwuru na Confucius mepụtara egwuregwu a ọzọ.
Tugharia site na Chinese o putara "Mahjong" yana "na-akpa nza"ma, dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, egwuregwu bọọdụ natara aha a n'ihi na a Confucius nwere mmasị n'ụdị nnụnụ niile. Site n'ụzọ, ọ bụ naanị ndị a ma ama ka akwadoro egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na ndị nkịtị na-egwu ya, ha na-emebi iwu.
N'aka nke ọzọ, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kwenyere na egwuregwu mahjong sitere na egwuregwu kaadị oge ochie nke China nke edere na China na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Ha Chọpụta mmalite nke egwuregwu na ọnọdụ nke Shanghai, Anhwei na Kiangsu, dị ka ihe akaebe nke ụdị egwuregwu kaadị dị ebe a.
Mahjong egwuregwu iberibe 🀄🀩
A mgbe set mejupụtara 136 ma ọ bụ 144 iberibe. E kewara Mahjong n'ụdị dị iche iche:
Uwe iberibe "Gburugburu"
Uwe iberibe "achara".
Uwe iberibe "Ihe omume".
Iberibe Dragọn Atọ.
Mahjong egwuregwu kọmputa
Mahjong ka na-egwu dika omenala osisi egwuregwu. Agbanyeghị, ebe egwuregwu dị n'ịntanetị ghọrọ ihe ewu ewu, ọ naghị ewe oge maka ụdị Mahjong dị iche iche ịntanetị.
Taa, egwuregwu bọọdụ na ntanetị ya bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na, dị ka egwuregwu ọkụ, a na-enyekarị ya n'efu. Ya mere, ọ egwuregwu mahjong dị dị ka egwuregwu egwuregwu n'ịntanetị na ụdị dịgasị iche iche nwere ọtụtụ motifs. Egwuregwu ọdịnala kachasị ewu ewu taa gụnyere:
Nwa na ọcha 2
Principlekpụrụ egwuregwu ahụ bụ na a ga-asachapụrịrị ụzọ abụọ ọ bụla n’oge ọ bụla. Ihe ikwesiri ime bu pịa a kenha ụzọ (ihe yiri ya). Ma, enwere ike wepu okwute ma oburu na okwughi ndi ozo kpuchie.
Ga-ahapụrịrị n'efu ma ọ dịkarịa ala otu akụkụ. Dabere na otu esi ahụ nkume, n'ezie ọ nwere ike ime, ọnweghị ụzọ abụọ ọzọ. Egwuregwu agwụla. A na-eji òké achịkwa egwuregwu ahụ.
Otu uru dị na egwuregwu Mahjong bụ na ọ bụghị naanị na-akwalite echiche ezi uche dị na ya, kamakwa ikike itinye uche na icheta.
Di iche iche di iche iche nke Mahjong
Dabere na ndekọ, ndị ahịa China wetara egwuregwu ahụ na mba ọdịda anyanwụ. E mepụtara iwu dị iche iche na usoro nke egwuregwu ahụ ebe a. Onye na-ere ahịa JP Babock ọ chọrọ ime ka iwu dị mfe na ọ bụ ya mere o ji bipụta akwụkwọ ahụ "Iwu nke Mah-JongN'ihi ya, Mahjong ghọrọ onye ama ama.
A gbanweela ụdị American nke Mahjong na ọdịiche dị na nke mbụ. Emegharịrị iwu nke ọdịbendị agbụrụ na mba ndị ọzọ dịka Japan ma ọ bụ Great Britain. The Hong Kong na Canton mbipute nke egwuregwu na-egwuri ugboro ugboro taa.
Mahdị Mahjong taa🀧
Hong Kong Mhjong ma ọ bụ Cantonese Mahjong 🀄
Mostdị egwuregwu kachasị eji eme ihe bụ Hong Kong Mhjong ma ọ bụ Cantonese Mahjong. Site na nchọpụta nke ụlọ ịgba chaa chaa n'ịntanetị, Japan webatara ịgba chaa chaa na ụlọ nzukọ ya, na-enye ndị egwuregwu ohere jikọọ na ndị ọzọ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Nke a mere ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe a ma ama karị, ma wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke egwuregwu a ma ama ọzọ.
Na-atụgharị uche, a naghịzi eme egwuregwu mbụ nke China na China. Ọ bụ naanị ole na ole mmadụ ole na ole na-eguzosi ike n'ihe na West.
Na China, yana Hong Kong, ụdị egwuregwu a gbanwere gbanwere nke ọma. Ndị ọzọ mgbanwe mgbanwe 1930s mere Mahjong egwuregwu ịgba chaa chaa a ma ama. N'adịghị ka egwuregwu ndị ọzọ nke ohere, mmadu enweghi ike imeri egwuregwu Mahjong n'ihi na enwere obi uto.
Egwuregwu chọrọ atụmatụ, ọsọ na nyocha nke ndị egwuregwu ndị ọzọ iji nwee ihe ịga nke ọma. Nke a na-ekwe nkwa Mahjong ọnọdụ ọgụgụ isi ka mma na ọgụgụ isi karịa egwuregwu ndị ọzọ.
Ihe dị iche na Mahjong bụ na ị nwere ike igwu egwu n'onwe gị. Mustkwesịrị ịwepụ taịl nile yiri nke ahụ iji ghọọ nna ukwu Mahjong. Ọrụ gị bụ ịchọta na iwepu kenha iberibe ka akara. Malite site na elu na elu elu, ma rụọ ọrụ na etiti. Codka jamhuuriyadda soomaaliyaMalite ma ọ bụrụ na enweghị ezigbo mkpali aka ekpe!
Iwu Mahjong nke Iwu
Iji kpọọ Mah Jong n'ụzọ ziri ezi, ịkwesịrị ịghọta na ịkọwapụta echiche ya bụ isi. Ndị a bụ iwu Mahjong iwu. E wepụtara ozi niile dị n'isiokwu a site na iwu International Mahjong.
Anyị nwere olile anya na ị ga-erite uru zuru oke na ya. 🙂
Kedu ihe ị chọrọ ịmalite ịkpọ Mahjong?
Nkume 144 ma ọ bụ 136 Mahjong
Tokens na Mahjong
Mah Jong, bụ egwuregwu mejupụtara Akụkụ 144. N'ime ha niile enwere ọtụtụ akara na akara ndị China na-enye ohere ka ị nweta njikọ dị iche iche. Iberibe ihe mejupụtara egwuregwu Mah Jong bụ ihe ndị a:
A na-agụkọta taịlị nkịtị site na 1 ruo 9, ma kewaa ya na atọ:
Okirikiri ma ọ bụ bọọlụ
Na kaadị ọ bụla enwere ihe anọ (ya bụ, anyị ga-enwe, dịka ọmụmaatụ, kaadị anọ nke atọ nke mkpụrụ edemede). A na-akpọkwa ihe ngosi nkịtị site na aha ndị ọzọ:
Na ibe Uno y Itoolu (1 na 9) nke ọ bụla uwe na-akpọ "Ọnụ".
Iji ibe n'etiti azụ na Asatọ (2-8) nke ọ bụla uwe mara dị ka "Dị Mfe".
Pụrụ iche tokens
Anyị nwere ike ịchọta ụdị mpempe akwụkwọ pụrụ iche:
Ifuru na Oge Tokens
A na-akpọ taịlị ndị a pụrụ iche n’ihi na ha na-enye akara dị iche na nke ndị ọzọ.
Ebube ugwu bu ihe kacha baa uru na egwuru-egwu, obughi na ha bara uru karie, mana ha na-emezi uru nke akara a dum.
A ga-egosiputa ifuru ahụ na ihe ngosi ọdụ ụgbọ elu ozugbo ị pụọ, a na-eji ha eme ihe ụfọdụ, ma were akara aka ọzọ. Ha anaghị emetụtakarị egwuregwu ahụ n'onwe ya nke ukwuu, ọ bụ ya mere ha ji akpọkwa "bonus chips".
Enwere ọtụtụ iwu Mahjong nke na-adịghị atụle ifuru na taịl oge, wepụ ha na egwuregwu ahụ.
N'ime nsọpụrụ nsọpụrụ anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche.
Dragọn: acha uhie uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha.
Ifufe: site n’Ọwụwa Anyanwụ, site na Ndịda, site n’Ọdịda Anyanwụ na site n’Ugwu.
Dị ka ọ dị na tokens, akara ngosi nsọpụrụ ọ bụla ugboro anọ (yabụ enwere akara ngosi South South 4, dịka ọmụmaatụ).
N'ikpeazụ, anyị nwere ifuru na taịl oge, nke na-agbakwunye taịl asatọ:
anọ flores: ha na-enwekarị pictogram na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha oji, ma na-acha ọbara ọbara.
anọ oge: ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile ka a na-enwe foto na-acha ọbara ọbara, nwekwaa anụnụ anụnụ ma ọ bụ oji.
Okooko osisi na oge a na - emetuta ikuku, a na - eji ya mee ihe dika ihe ntinye ego site na ikuku obula:
La ifuru 1 na ọdụ 1, metụtara ikuku Este.
Ifuru 2 na ọdụ 2, na ifufe Na.
Mgbe anyị na-ekwu maka ifuru ifuru 3 na ọdụ 3, na ifufe West.
La ifuru 4 na ọdụ 4, na ifufe North.
Ebumnuche nke egwuregwu bụ nweta ọtụtụ isi dị ka o kwere mee a ga-akwụ gị ụgwọ maka "Ime Mahjong".
Iji mee Mahjong na RCM ọ dị mkpa ịnwe Ihe 8 opekata mpe (agunyeghi isi ifuru / oge), yabụ na ị ga-amata mmegharị nke ọma
Egwuregwu Mahjong zuru oke nwere aka 16 ma ọ bụ egwuregwu, nkewa gburugburu: Agba 4 nke egwuregwu 4 ọ bụla.
Ọ bụ ezie na egwuregwu zuru ezu bụ aka 16 ma ọ bụ egwuregwu, n'ọtụtụ asọmpi ọ na-akpọ oge. Ọtụtụ mgbe, egwuregwu bụ ma ọ bụ 90 nkeji ma ọ bụ 2 awa.
Agba nke ọ bụla nwere ikuku jikọtara ya, nke ejiri ya mee ka akara dị na njedebe nke egwuregwu ọ bụla, nke akpọrọ ifufe juru ebe niile:
Agba nke 1: Ifufe Ọwụwa Anyanwụ
Agba nke abụọ: Ifufe South
Agba nke 3: West Ifufe
Agba nke 4: Ikuku Ugwu
Ifufe nke gburugburu ọ bụla anaghị emetụta egwuregwu ahụ kpọmkwem, ọ bụ naanị akara. Na njedebe nke agba ọ bụla, a mgbanwe nke oche.
Tupu igwu egwu
A na-ekesa ifufe naanị otu ugboro, na enweghị usoro, na mbido egwuregwu ahụ.
A na-ekenye ikuku ọ bụla otu ebe ọ ga-anọ. Ọwụwa Anyanwụ kwesịrị inwe South na aka nri ya, North dị n'aka ekpe ya na West dị n'ihu.
Rịba ama na ọ naghị ekwenye na akara kadinal!
Dabere na ifufe metụrụ ya aka, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-anọdụ ala dịka ọnọdụ ahụ. A na-ekesa ifufe n'ọtụtụ ụzọ, mana nke kachasị mfe bụ:
Site na ịtụpu onye ọkpụkpọ ọ bụla na inye nọmba na ifufe (1 = East, 2 = South, 3 = West, 4 = North na 5,6 = Roll ọzọ).
Idebe otu mpempe nke ifufe ọ bụla na-eche ihu, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ahọrọ otu.
Tupu egwuregwu ọ bụla
Mgbidi ahụ nwere 18 plọg de 2 tok elu, na-eme square, ma a ga-ewu ya na mmalite nke aka ọ bụla na egwuregwu ahụ.
Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-eme akụkụ nke mgbidi ahụ site na ijikọ usoro 18 taịlị ogologo na taịlị 2 dị elu, ha niile na-agbada.
Ozugbo onye ọkpụkpọ ọ bụla wuru akụkụ ha nke mgbidi, nsonaazụ ahụ kwesịrị ịbụ square nke 18 blocks x 18 blocks.
Tupu ikesa ibe ahụ, ọ dị mkpa ịhụ akụkụ nke mgbidi anyị ga-amalite nkesa.
Iji mee nke a, ihe ọkpụkpọ ahụ Este ga malite abụọ dais, nke ga-egosi akụkụ nke mgbidi nke nkesa nke ibe ga-amalite.
Iji mara akụkụ nke mgbidi ebe nkesa na-amalite, a gụrụ ya malite na East ma na-eso n'usoro egwuregwu (counter-clockwise). Ya mere, ị ga-amalite na mgbidi ọwụwa anyanwụ ma ọ bụrụ na ị jiri mpịkpụ tụgharịa 5 ma ọ bụ 9, n'akụkụ ndịda ma ọ bụrụ na ị tụgharịa 2, 6 ma ọ bụ 10, wdg.
N'ihe atụ anyị, onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ akpọgharịala 6 na 5, na-egosi na mgbidi ahụ ga-emeghe n'akụkụ West player (6 + 5 = 11).
Onye ọkpụkpọ dị n'ihu mpempe mgbidi nke nkwụsị ga-eme bụ maka ịgba ndị ọzọ agba 2 dais nke ga-egosi ngọngọ nke taịl nile nke mgbidi ga-emeghe (ya bụ, ngọngọ nke a ga-esi si na taịl ahụ). N'ihe atụ anyị, ọ bụ onye ọkpụkpọ ọdịda anyanwụ.
Nkesa ibe na - eme onye ọkpụkpọ ọ bụla na - ewere ngwugwu ya.
Ogwe mmalite ga-esote ọnụ ọgụgụ nke ngwugwu anọ ahụ gbanwere (nke abụọ ahụ iji mara n'akụkụ mgbidi nke nkesa ahụ na-amalite na 2 dice ndị ọzọ iji mara mgbochi).
Ọ na-amalite guo site n’aka nri rue aka ekpe n'akụkụ nke mgbidi gosiri site abụọ na mbụ dais (si ele ihe anya nke ihe ọkpụkpọ bụ onye na akụkụ nke mgbidi site na nke ọ na-emepe. Na anyị, na West player). Ọ na-ewere ọzọ ngọngọ Tinye 4 dice na mgbochi.
Cheta na: Rịba ama na ọ nwere ike bụrụ na nchịkọta nke dice 4 karịrị 18 (nke bụ obosara nke otu akụkụ nke mgbidi ahụ). N'okwu ahụ, a na-agụta ngọngọ nke mbụ n'akụkụ nke ọzọ nke mgbidi ahụ ruo mgbe ngụkọta nke dice ahụ ruru.
N'ihe atụ anyị, West tụgharịrị ọzọ dice abụọ na 2 na 4. Ya mere, a ga-ekesa nkesa ibe site na ngọngọ na-eso ngọngọ 5 (20 + 6 + 5 + 4 = 5). Nke ahụ bụ, ị ga - amalite ibute taịlị site na mgbidi ahụ na ngọngọ na - esote nọmba 20, na - agụta site na nri gaa n'aka ekpe (site na echiche onye ọkpụkpọ West) site na mgbochi mbụ n'akụkụ West player.
Taịlị ahụ tupu mbido nkesa nkesa ga-abụ taịlị ikpeazụ na mgbidi.
N'ihe atụ anyị, taịlị ikpeazụ dị na mgbidi ahụ bụ ngọngọ dị n'elu nke ngọngọ 20 (na-acha anụnụ anụnụ), ngọngọ nke esi ewere taịl ahụ bụ mgbochi uhie.
Na RCM enweghị mgbidi nwụrụ anwụ.
Onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ ga-ewere ụzọ abụọ abụọ nke tokens (na mkpokọta 4 tokens).
Ihe mgbochi na akara aka ikpeazu na-agaghari (ma achoghi ya) iji gosiputa nke oma na akuku mgbidi ahu bu ogwugwu. Ihe mgbochi a nwere ike ịgbanye onye ọkpụkpọ ọ bụla (na-abụkarị onye ọkpụkpọ n'ihu mgbochi a ma ọ bụ onye ọkpụkpọ East ahụ n'onwe ya).
Mgbe ahụ onye ọkpụkpọ South ga-ewe ihe mgbochi abụọ na-esote.
Mgbe ahụ West player ga-ewe abụọ na-esote.
Mgbe ahụ North ọkpụkpọ na-esote abụọ blocks.
Ka oge na-aga, a ga-enye ndị ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ bọọlụ abụọ ọzọ.
Ya mere, ruo mgbe onye ọkpụkpọ ọ bụla weere akara atọ nke taịlị 4 (ya bụ, n'oge ahụ onye ọkpụkpọ ọ bụla kwesịrị ịnwe taịlị iri na abụọ na mkpokọta).
N'ikpeazụ, onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ ga-ewere taịl 2 (n'elu taịl nile nke blọlụ akara na-acha ọbara ọbara).
Na mgbe ahụ ndị South, West na North ndị na-egwu egwuregwu ga-ewere akara ngosi 1 ọ bụla.
Ná ngwụsị nke nkwekọrịta ahụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-enwe ibe iri na atọ, belụsọ East, nke ga-enwe 13. Onye ọkpụkpọ nke ọwụwa anyanwụ ga-etinye dice ahụ n'aka nri ya iji gosi na ọ bụ East.
Kpụrụ Omenala ndị China Ochie Nwụrụ Anwụ Token
El ngọngọ site na ebe ịmalite ịmalite ibe bụ ngọngọ dị na ọnọdụ nke na-egosi nchikota nke atọ dais akpọrepu n'ihu.
Se guo site n’aka nri rue aka ekpe site na echiche nke onye ahu na akuku mgbidi.
N'ihe atụ anyị, ngọngọ mbido bụ ngọngọ 12 n'akụkụ ugwu nke mgbidi onye ọkpụkpọ ahụ. Nke ahụ bụ, ị ga - amalite iwere taịlị na mgbidi ahụ site na mgbochi 12, nke bụ ngọngọ uhie na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Ozugbo ị matara ebe ị ga-amalite na-ewere taịl ahụ si, e nwere otu taịl nile na-enweghị ike iji na-ezu ohi tiles taịl nile egwuregwu. A na-akpọ tokens ndị a mgbidi nwụrụ anwụ, na ha bụ 14 tok (ya bụ, 7 blocks) na naanị na-eje ozi na-mmezi ibe.
Mgbe niile ga-anọrịrị 14 nwụrụ anwụ mgbidi tokens. Ya mere, mgbidi ahụ nwụrụ anwụ ga-aga ebe ọ na-ewepụ ya taịl ndị na-anọchi ya. Ọ bụrụ na a nwuru mgbidi nwụrụ anwụ n’emezughị egwuregwu ahụ, a ga-atụle egwuregwu ahụ n’enweghị onye meriri (akpọrọ ọnọdụ a aka adighi).
N'ihe atụ anyị, ọ bụ taịl 14 (ngọngọ 7) gaa n'aka nri site na ụlọ ụlọ. Ha bụ blọg na-acha anụnụ anụnụ.
Ozugbo emebere ngọngọ mmalite, azụmahịa mgbawa na-amalite. Ọ bụla ọkpụkpọ na-ewepu akara ha nke tokens dị ka akọwara n'elu.
Tupu ịmalite, anyị ga-echeta na enwere isi ihe atọ ma ọ bụ na-agagharị na Mahjong, mana iji nwee ike ịmepụta ha, a ga-agbaso iwu ụfọdụ:
Ọ bụ 3-tile kwụ ọtọ n'usoro nke otu uwe (Ojo, 3 taịl nile kpọmkwem, ha abaghị uru steepụ nke taịl abụọ ma ọ bụ 2).
I nwere ike na-etolite:
jiri mkpofu nke ọkpọ ihe ọkpụkpọ na ekpe
ma ọ bụ jiri akara ngosi si na mgbidi.
Wezuga: Ọ bụrụ naanị na ị ga - eme Chi iji nweta Mahjong, ị nwere ike ime ya na taịlị nke ọkpụkpọ ọ bụla tụfuru (ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ nke dị n'aka ekpe).
Ọ bụ a Nchikota 3 dakọtara taịl.
Ọ nwere ike kpụrụ na discard nke ọ bụla ọkpụkpọ.
Ọ bụ a Nchikota 4 dakọtara taịl.
Ọ bụrụ na ị kpughere a Anụmanụ na ị na-enweta site na mgbidi ihe iriba ama nke yiri nke Pung, ị nwere ike ịgbasa Pung ma mepụta Kong. (Ojo, ị nweghị ike ịmepụta Kong n'ụzọ dị otú a site na ịtụfu onye ọkpụkpọ ọzọ. Ozugbo egosiputara Pung, enwere ike ịgbasa ya na Kong na akara aka inwetara)
Ọ bụrụ n’inwere taịlị dabara na aka gị 4, ka ha wee gụọ dị ka Kong, ị ga-egosi ya. Ga-etinye 4 iberibe ihu ala (ịbụ zoro ezo, n'amaghị ihe ọ bụ) na-ekwusa ya dị ka Kong. A na-akpọ Kong a, ebe ejiri aka tokens abụọ ahụ wee na-abụ abụ ma na-egosighi ya Zoro ezo Kong.
Sense nke egwuregwu
Egwuregwu ahụ na-eme na ntụgharị, na-eme mgbe niile n'otu ụzọ ahụ: na-adịghị anya. Soro usoro a: East-South-West-North-East -..., wdg.
A na-agbaso echiche nke egwuregwu a mgbe niile, belụsọ mgbe onye ọkpụkpọ nke na-enweghị ntụgharị ga-achọ tile nke onye ọkpụkpọ ọzọ tụfuru iji mee Pung, Kong ma ọ bụ Mahjong.
N'ọnọdụ ahụ, iwu ahụ agbajiri na egwuregwu ahụ ga-aga n'ihu maka onye ọkpụkpọ ahụ, mana ọ ga-aga n'ihu ọzọ n'echiche nke anyị gosipụtara site na onye ọkpụkpọ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ na-atụfu akara aka nke onye ọkpụkpọ West chọrọ. N'okwu ahụ, uche ahụ gbajiri (ebe ọ bụ na ọ kwesịrị ịbụ onye ọkpụkpọ South), egwuregwu ahụ ga-esochi onye ọkpụkpọ West, onye mgbe ọ nụsịrị akwụkwọ a tụfuru atụfu, ga-atụba otu n'ime iberibe ya, egwuregwu ahụ ga-aga n'ihu maka onye ọkpụkpọ North. .
Mgbe nkesa nke ibe
Ozugbo ekesara ihe ndị ahụ, a ga-egosiputa ifuru na akara ngosi nke onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere, na Kong enwere ike (ịgbaso usoro).
A na-ebu ụzọ gosi okooko osisi na oge.
Malite na onye ọkpụkpọ East ma na-agagharị na ntụziaka nke egwuregwu (East-South-West-North), ndị egwuregwu ahụ na-ekwupụta Ifuru na Oge Tokens ha nwere, na-etinye ha n'ihu na n'aka nri.
Maka Ifuru ọ bụla na Oge Token gosipụtara, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ewepụta akara ọhụụ site na mgbidi.
A na-akpọ tokens ndị ọzọ a napụrụ na mgbidi maka ifuru / oge ma ọ bụ Kong nnọchi ma ọ bụ ntụkwasị ibe. A na-ewepụ ibe nnọchi site n'akụkụ njedebe nke mgbidi ahụ. N'ihe atụ anyị, n'ihi ụcha acha anụnụ anụnụ.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime taịl ahụ ndị ọhụrụ bụ Ifuru na Oge ọzọ, a ga-egosi ya, a ga-ewere taịl ọzọ site na nsọtụ mgbidi ahụ, were gabazie.
Enweghị ọrụ iji gosi ozugbo ma ifuru / oge taịl nile ma ọ bụ Kong. Enwere ike igosipụta ha n'oge ọ bụla n'egwuregwu ahụ ọ bụrụhaala na egwuregwu ahụ agwụbeghị.
Mmalite nke egwuregwu
Egwuregwu na-amalite site na tụfuo otu tile site na onye ọkpụkpọ East (cheta na East na-amalite site na taịl 14, ebe ndị ọzọ na-amalite na 13).
Egwuregwu ahụ mepụtara mgbe niile na-eso echiche a kọwara, ọ na-agbajikwa mgbe onye ọkpụkpọ nke na-enweghị ntụgharị chọrọ taịlị a tụfuru iji mee Pung, Kong ma ọ bụ Mahjong. Mgbe ahụ ọ ga-aga n'ihu ọzọ maka onye ọkpụkpọ ahụ, na-agbaso otu echiche nke egwuregwu ahụ.
Egwuregwu ahụ na-agwụ mgbe onye ọkpụkpọ na-eme ka Mahjong ma ọ bụ mgbidi taịl nile gwụ.
Tụfuo ihe akaebe
Oge ọ bụla onye ọkpụkpọ tụfuru otu taịl, ha ga-edebe ya ihu n'ihu ọnọdụ ha (nke ahụ bụ otu ọ ga - esi dịrị maka egwuregwu ahụ fọdụrụnụ), n'ahịrị ahịrị nke taịl 6 (ahịrị mbụ na mpaghara etiti nke tebụl na ndị na-esote na ndị ọzọ dị nso).
Akpọghị akara aka. Naanị nchikota ndị a kpụrụ na iberibe ndị egwuregwu ndị ọzọ tụfuru, ifuru / ọdụ ma ọ bụ Ime Mahjong (nke na-egosi Chi, Pung, Kong, Flower ma ọ bụ Mahjong / Hu) ka ekwuru n'olu dara ụda.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ chọrọ ị nweta akara aka (ma nwee ike ịnara ya) ọ ga-ekwukarịrị ozugbo ọ tụfuru ya, ọbụlagodi na ọ bụghị nke ya.
Enwere ike iwere tile a tụfuru atụfu naanị iji mepụta nchikota, nke aghaghi igosi ndi ozo nke ndi ozo.
Ntị! Nweghị ike iwere tile a tụfuru naanị ka ị gbakọta, na-enweghị etolite egwu.
Ozugbo ọ bụla onye ọ bụla ewere taịl ahụ atụfuru, enweghị ike iji ya maka egwuregwu ndị ọzọ (yabụ, ọ bụrụ na emesịa anyị nwere mmasị na aka tufuo tufuo tupu, anyị agaghị enwe ike ịnara ya).
Mgbe ọ bụla tụfuo
Mgbe ị tụfuru akara ngosi, ihe 3 nwere ike ime:
Onye ọkpụkpọ chọrọ taịl ahụ a tụfuru iji mezue Pung ma ọ bụ Kong ma ọ bụ ime Mahjong.
Ga-ekwu ya ozugbo a tụfuru gị, ọ bụrụgodị na ọ bụghị nke gị.
Ikwesiri ikpughe egwuregwu ahụ ka ndị egwuregwu ndị ọzọ wee hụ ya n'oge egwuregwu ahụ.
Ugbu a, usoro egwuregwu ga-aga n'ihu maka onye ọkpụkpọ a, onye ga-atụrịrị ihe ngosi.
¡Ojo, Onye ọkpụkpọ na-adọta tile a tụfuru enweghị ike iwepụta taịl site na mgbidi! (Ewezuga Kong na-eme)
Ọ bụrụ na ọ mee Mahjong, ọ ga-ahapụ tile ahụ dọtara nke o ji mechie dina ala njikọta ihe ọ ga - eji merie:
Onye ọkpụkpọ ahụ n'aka nri nke onye na-atụfu ihe ngosi chọrọ ka akara ahụ mepụta Chi.
Okwesiri ikwu nke a ozugbo ewepuru ya.
N'ikpeazụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-atụfu taịlị (Cheta, onye ọkpụkpọ na-adọta taịley a tụfuru anaghị ewepu na mgbidi, belụsọ ma ọ bụrụ na ọ na-etolite Kong).
Onweghi onye egwuregwu choro ihe akaebe.
Enweghi ike iji tile tụfuru maka egwuregwu ndị ọzọ.
Onye ọkpụkpọ ọzọ n'usoro egwuregwu ga-ewere taịl site na mgbidi wee tụfuo taịl ọzọ.
Na-alụ ọgụ maka tile a tụfuru atụfu
Ọ bụrụ na ihe karịrị otu ọkpụkpọ na-ekwu otu akara ahụ, usoro ị ga-ahọrọ maka ịnara akara a ga - abụ otu a:
Onye ọkpụkpọ chọrọ ka akara aka ahụ mee Mahjong (o Hu).
Maka onye ọkpụkpọ chọrọ akara aka maka a Anụmanụ ma obu a Kong.
Maka onye ọkpụkpọ chọrọ akara ka ọ bụrụ nke a Chi.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị egwuregwu abụọ ma ọ bụ karịa chọrọ otu taịl ahụ iji mee Mahjong, onye ọkpụkpọ nke ọ na-ebu ụzọ merie n'echiche nke egwuregwu ahụ. Naanị otu onye ọkpụkpọ nwere ike imeri.
Izu ogbe a tụfuru atụfu
Mgbe onye ọkpụkpọ na-ese ihe akaebe nke onye ọzọ tụfuru, ọ ga-akụrịrị akara aka ahụ ezuru, dozie ya ka o wee gosi onye nyere ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ esee ihe akaebe nke ọkpụkpọ na aka ekpe ya (a 3 nke achara ma ọ bụ a 9 nke diski), ị ga-ahapụ Nchikota anya na-adọrọ adọrọ akara wee tinye ya n'aka ekpe:
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-ese akara ahụ tụfuru ọkpụkpọ n'ihu (9 nke Disks), ị gha ekpughere nchikota ya na tile a zuru ezu wee gbanye ya n'etiti.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-ese akara ahụ tụfuru ọkpụkpọ n'aka nri (a 9 nke diski), ị ga-ahapụ Nchikota anya na ezuru mgbawa tụgharịa ma dọba ya n'aka nri.
Mgbe emechara nchịkọta jikọtara ya na akara aka nke onye ọkpụkpọ ọzọ tụfuru, a ga-ahapụrụ nchikota ahụ maka egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu ahụ. akụkụ aka nri nke onye ọkpụkpọ kpụrụ ya.
Nke ahụ bụ, ma okooko osisi / ọdụ na Kong, yana njikọta ya na taịlị ndị a tụfuru atụfu, n’aka ekpe nke ọkpụkpọ ọ bụla.
Ná ngwụsị nke egwuregwu
Gụọ isi ihe ndị dị na ya
Ọ bụrụ na taịl nile dị na mgbidi ahụ gwụ ma ọ dịghị onye meriri egwuregwu ahụ. A na-akpọ ụdị egwuregwu ndị a aka adighi.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ mere Mahjong, ọ ga-agụrịrị isi ya niile n'olu dara ụda (ọbụlagodi isi maka okooko osisi), na-ewere taịlị ya tụfuru maka nchikota ma ọ bụ taịlị ọ bụla (maka isi nke ọ bụla a tụfuru tile ma ọ bụ maka ihe ọ bụla 10 a taịl weghaara ihu ala).
Nke mbu, a na-agbakwunye isi okwu n’egwuregwu obula, iji mee ka o doo anya na ihe ruru 8 opekempe. Mgbe ahụ, a na-agbakwunye isi maka ifuru.
Emere nke a iji dokwuo anya na ngụkọta oge na tebụl na-enweghị iji pensụl na akwụkwọ maka akaụntụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ agbaala akara 12 (gụọ isi ifuru), ọ ga-ewere akara iri na abụọ site na diski ya:
O nwekwara ike were taịl 3 (1 ihu ala = akara 10, 2 ihu elu = 1 isi ọ bụla)
Cheta na: Ozugbo onye ọkpụkpọ na-ekwu Mahjong, ndị egwuregwu ndị ọzọ ekwesịghị igosi taịl ha ma ọ bụ mebie taịl ahụ a tụfuru atụfu ruo mgbe agụtala isi ihe niile.
Mgbe egwuregwu ọ bụla gwụchara (ma ọ bụrụ na mmadụ enwee mmeri ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere aka efu), ikuku ndị metụtara ọkpụkpọ ọ bụla na-agbagharị (ifufe, ọ bụghị ndị egwuregwu ahụ, belụsọ ma gburugburu gbara ya gburugburu).
Onye ọkpụkpọ nke bụ East ghọrọ North, onye South bụ East, West ghọrọ South na North gaa West.
Na ngwụcha nke ọ bụla
Mgbanwe nke oche
Na ngwụcha nke ọ bụla, na mgbakwunye na ịmegharị ikuku, enwere mgbanwe n'ọnọdụ ndị egwuregwu ahụ. Ebumnuche na mgbanwe oche ndị a bụ iji hụ na ọkpụkpọ ọ bụla nwere n'aka ekpe na aka nri nke ọ bụla n'ime ndị egwuregwu ndị ọzọ n'egwuregwu ahụ.
Ná ngwụsị nke gburugburu nke East ifufe na tupu ịmalite gburugburu nke ifufe South, onye ọkpụkpọ nke ga-abụ East ọzọ na onye ga-abụ South na-agbanwe oche ha. Ndị egwuregwu West na North na-agbanwekwa oche ha.
Ná ngwụsị nke gburugburu nke South ifufe na tupu ịmalite gburugburu nke ifufe ọdịda anyanwụ, onye ọkpụkpọ nke ga - abụ East ga - aga oche nke West ọkpụkpọ, nke ga - abụ South na nke onye ọkpụkpọ North, onye ọkpụkpọ West na South na North na East.
Ná ngwụsị nke gburugburu nke ọdịda anyanwụ ifufe na tupu ịmalite gburugburu ikuku ikuku nke NorthOnye ọkpụkpọ nke ga-abụ East na onye ga-abụ South na-agbanwe oche ha. N'otu aka ahụ, ndị egwuregwu West na North ga-agbanwe oche ha.
O nwere ike iyi ihe dị mgbagwoju anya (ma ọ bụ), mana n'ụzọ dị otú a ndị egwuregwu niile na-agbanwe ndị na-emegide ha site n'aka ekpe na aka nri, si otú a na-egbochi ịdọta ifufe na mbido egwuregwu ahụ site n'ịka ndị agbata obi anyị akara maka egwuregwu ahụ dum.
Cheta na: Otu ụzọ ịmara ma emeela mgbanwe oche ahụ n'ụzọ ziri ezi bụ na onye ọkpụkpọ nke nwetara South mgbe ị na-agbachi ifufe kwesịrị ịbụ onye ọkpụkpọ East mgbe ọ malitere South. Onye nwetara West kwesịrị East mgbe ọ malitere West gburugburu, na onye ọ bụla nwetara North ga-abụ mgbe ịmalite North gburugburu.
Gosi okooko osisi mbu
Onye ọkpụkpọ ọ bụla, n'aka nke ya, ga-egosi ma ha nwere ifuru (site n'ịkpọ oku "Ifuru" ma ọ bụ "Ifuru") ma ọ bụ enweghị okooko osisi ọ bụla ("Enweghị m", "Enweghị m ifuru" ma ọ bụ "Ọ dịghị okooko osisi"). Mgbe ha narachara akara ifuru na ngwụcha mgbidi ahụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-akpọ oku na ha enweghị ifuru ọzọ ("Enweghị okooko osisi ọzọ" ma ọ bụ "Enweghị ifuru ọzọ").
Onye ọkpụkpọ Este O nwere Ifuru na Oge Token, yabụ ọ ga - egosi ya site na ịhapụ ya n’aka nri ya were akara ọzọ site na nsọtụ mgbidi ahụ (ọ na - enweta 5 nke Disk). Ozugbo o werela ihe mgbakwunye, onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ kwesịrị iji olu dara ụda kwuo na ya enweghị ifuru ọzọ.
Mgbe ọ bụ oge ọkpụkpọ Na kwesịrị ikwu n'olu dara ụda na ọ dịghị okooko osisi.
Dị ka ọwụwa anyanwụ, onye ọkpụkpọ West, o nwere okooko osisi na oge akara (o nwere akara ngosi ifuru abụọ), ma mgbe ị na-ewere faịlị agbakwunye na mgbidi ahụ, taịlị abụọ yiri nke 2 Characters ga-apụta. Mgbe esere ya taịl ndị nnọchi, West ga-asị na ọ nweghị okooko osisi.
Mgbe ahụ ọ ga-abụ oge ọkpụkpọ North. O nweghikwa okooko osisi, yabụ ọ ga-ekwu n'olu dara ụda na ya enweghị ifuru.
Onye ọwụwa anyanwụ bụ onye mbụ tụfuru taịl. Onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ na-akpọ akara ngosi bamboo 3, tinye ya n'ihu ya:
Ebe ọ bụ na akara atọ achara atọ chọrọ onye ọkpụkpọ South na ọ nweghị onye ọzọ rịọrọ ya, ọ na-ewere ya ma mepụta Chi (3-2-3 nke Bamboo), na-ahapụ ya n'aka nri ya n'anya ma jiri 4 Bamboo tụgharịa (na-apụ) akara aka ekpe na-egosi na ọ bụ onye ọkpụkpọ na aka ekpe ya, East, onye tụbara ya).
Ebe ọ bụ na Ndịda ewerela mkpofu, ọ gaghị ezu ohi na mgbidi. Ugbu a, ọ ghaghị ịtụfu akara aka, ma tụgharịa 9 nke Circles.
Otú ọ dị, 9 nke Circles token nwere mmasị na onye ọkpụkpọ North iji mepụta Kong. Ya mere, a ga-awụgharị oge onye ọkpụkpọ ọdịda anyanwụ, onye ọkpụkpọ North ga-egosikwa mbugharị ya (ọ ga-egosiputa Kong a, ebe ọ bụ na ọ bụghị zoro ezo), na-atụgharị otu n'ime Bamboo 9 si n'etiti njikọta (ebe ọ tụbara ya onye ọkpụkpọ na-esote ya, South) na-ewere akara ngosi sitere na nsọtụ mgbidi ahụ (ebe ọ bụ na mgbe ị kpụchara Kong, a ga-enwetara ihe akaebe na nsọtụ mgbidi ahụ). Ọ na-enweta 7 nke Characters.
Ọ bụ ezie na ugbu a ọ ga-abụ onye ọkpụkpọ North ka ọ tụba akara ngosi, o kpebiri ikpughe Kong zoro ezo (ya mere ọ na-agbanye 4 tokens ihu) wee were akara ngosi ọzọ.
Mgbe o nwetasịrị akara ya na mgbidi (ọ na - enweta 1 nke Circles), onye ọkpụkpọ North ga-atụfu akara ngosi, mgbe nke a gasịrị, ọ bụrụ na ọ nweghị mmasị na onye ọ bụla, onye ọkpụkpọ ọwụwa anyanwụ ga-egwu, na-ewere akara site na mgbidi, wdg. Egwuregwu ahụ agwụla mgbe onye ọkpụkpọ na-eme Mahjong ma ọ bụ na taịl nile ejirila (enweghị aka).
Ejije na Akara ha
Na RCM enwere egwuregwu 81, nke ruru 1 site na isi 88. Ha dị ha mkpa Ihe 8 inwe ike ime Mahjong.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ mechiri tile nke ọzọ tụfuru, ọ na-anata site na onye ọkpụkpọ ahụ akara aka ya, gbakwunyere isi ihe 8 sitere na ndị egwuregwu niile (gụnyere onye tụbara taịle nke mere ka emechie).
Ọ bụrụ na ọ mechie tile nke esitere na mgbidi ahụ, ọ na-agbakwunye akara 8 na akara aka ya wee nata ego ahụ n'aka onye ọ bụla n'ime ndị iro 3 ahụ.
tufuo Site na mgbidi
Tụfuo Ihe mmeri + 8 -
Ezumike 8 -
niile - Ihe mmeri + 8
General ụkpụrụ na Nchikota ejije
Ọnụ ọgụgụ egwuregwu na-agụnye ndị ọzọ
Mgbe enweghi ike ịmegharị na-ejikọtaghị nke ọzọ, agagharịrị agabigaghịrịrị ya.
Ofkpụrụ nke mwepu ma ọ bụ machibidoro iji egwuregwu eme ihe ugboro ugboro
Ọ bụrụ na ejiri ihe abụọ ma ọ bụ atọ ejiri mepụta otu agagharị, enwere ike iji otu n'ime nchikota ndị a jiri ya na njikọ ndị ọzọ wee mepụta ọhụụ ọhụrụ.
Enwere ike ịgbakwunye ha: isi 1 maka Chisboo Bamboo Abụọ Dị Ọcha, ihe 1 maka agwa abụọ dị ọcha na njedebe Chis na naanị isi 1 maka Mixed Double Chow (1-2-3 nke Bamboo na 1-2-3 nke Characters). Ọ gaghị ekwe omume iji 7-8-9 nke Bamboo na 7-8-9 nke Characters maka isi ihe ọzọ site na Mixed Double Chow, ebe ọ bụ na anyị ejirila otu n'ime njikọta nke Chis Terminals Pure na-egwu (1-2 -3, maka Bamboos na Characters).
Ejije metụtara aka zoro ezo
N’egwuregwu ndị e zoro ezo site na okike, a naghị agbakwunye isi maka Aka zoro ezo, ọ bụ ezie na ha nwere ike jikọta ya na Aka zoro ezo kpamkpam.
Egwuregwu ndị a bụ: Taịlị ejiri ya na obere nsọpụrụ, Taịlị ejiri ya na nnukwu ugwu, 7 ụzọ abụọ, anụ ọhịa zoro ezo 4, ọnụ ụzọ itoolu, ụzọ abụọ dị ọcha na-esochi ya na ụmụ mgbei iri na atọ.
Abụọ gosipụtara Kong bara uru 4.
Kong a chụpụrụ tinyere ihe zoro ezo kwesịrị uru 6.
Kong abụọ zoro ezo kwesịrị uru 8.
Ihe ngosi 1
1. Yiri Chi abụọ
Ubube abụọ nke otu uwe na otu nọmba nọmba.
2. Ugboro abụọ Mixed Chi
Ubube abuo abuo di iche iche, mana otu onu ogugu.
3. Short Shorter
Chis abuo nke otu uwe, ya na onodu ogugu n’usoro.
4. Abụọ Dị Ọcha Ọnụ Chis
Uzo nke 1-2-3 na 7-8-9 nke otu uwe.
5. Mkpoko Ekwentị ma ọ bụ Ifufe
Aka nke nwere Pung of Terminals (counters 1 na 9) ma ọ bụ Winds, na-abụghị ma Ifufe nke Onwe ma ọ bụ Oké Ifufe (Ifufe nke gburugburu).
6. Kong Kpughere
Kong nwetara site na akaebe a tụfuru ma ọ bụ site na itinye akara na Pung gosipụtara. Rịba ama: A tụfuru enweghị ike ịdọrọ iji gbasaa Pung.
7. Ezinaụlọ na-anọghị ya
A aka nke enweghị ibe maka 1 nke ụdị 3 suut. Nke ahụ bụ ịsị, jiri naanị 2 suut. Ọ nwere ike iburu Honors.
8. Agaghị asọpụrụ
Aka nke mejupụtara naanị akwa tok, na-enweghị ihe mkpuchi Honors. Nke ahụ bụ, Enweghị Ifufe ma ọ bụ Dragons.
9. Edide Chere
Na-eche maka 3 ma ọ bụ 7 iji mepụta Chi na 1-2 ma ọ bụ 8-9. Aka a adịghị irè mgbe ejikọtara ya na ụdị ọ bụla nke Chere (dịka ọmụmaatụ, ichere iji mechie ibe 7-7-8-9 ka a na-ewere dị ka ngwakọta nke Edge Wait na Simple Chere, ebe enwere ike ịtụle ya 7 ga-abụ 7-8- 9 ma ọ bụ ụzọ 7-7).
Mara: Nọgide na-enye mgbe achọrọ otu akara.
Dịka ọmụmaatụ, ichere iji naanị Bamboo 7 mechie:
10. Chere Emechiela
Mechie Chere Emechiri Emechi (dịka ọmụmaatụ, ịnwe 2-4 ma na-eche 3). Aka a anaghị adị irè mgbe ejikọtara ya na ụdị ọ bụla nke Chere (dịka ọmụmaatụ, ichere imechi na ibe 2-2-2-4 a na-ewere dịka nchikota nke Chere Chere na Mfe Dị Mfe, ebe ha na-eje ozi ma 3 na a 4). Agbanyeghị, ijikọta Chere na (dịka ọmụmaatụ, 6-7-7-8-9 na ichere maka 8 ka a na-ahụta dịka ngwakọta nke Edge Chere na Chere Chere, mana naanị akara ngosi 8 na-emechi).
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere ike imechi ya na 5 nke Circles na:
11. Chere Dị Mfe
Mechie kaadị na-etolite ụzọ. Mbugharị a anaghị adaba mgbe ejikọtara ya na ụdị ọ bụla nke Chere (dịka ọmụmaatụ, ichere imechi na ibe 2-2-2-4 ka a na-ewere dị ka ngwakọta nke Chere Chere na Mfe Dị Mfe, ebe ha na-eje ozi ma 3 na a 4). Agaghị anabata ya ma ọ bụrụ na atụmanya abụọ ka ha mechie ụzọ (dịka ọmụmaatụ, 6-7-8-9 ma tụọ anya 6 ma ọ bụ 9).
12. Mechie mgbidi ahụ
Mechie ihe akaebe jidere na mgbidi.
13. Okooko Osisi na Oge Ememme
Ifuru ọ bụla bara uru 1. A na-agụta ha na njedebe nke nchikota nke isi niile. Ha anaghị eje ozi opekempe nke isi 8. Enwere ike igosipụta ha oge ọ bụla ịchọrọ. A na-ahapụ ha n'aka nri (dị ka ihe ndị ọzọ na-agagharị na taịlị ekpughere) ma na-ewere taịl ọhụrụ site na nsọtụ mgbidi ahụ. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ mechiri akara ngosi ọhụrụ ahụ, a ga-agbakwunye otu isi maka imechi mgbidi ahụ.
14. Ugbo Dragons
Pung (ma ọ bụ Kong) nke Dragons. Enwere ike zoo ya ma ọ bụ kpughee ya.
15. Uche Ikuku Pung
Pung (ma ọ bụ Kong) nke ikuku dị ike, nke kwekọrọ na ifufe nke gburugburu. Enwere ike zoo ya ma ọ bụ gosi ya.
16. Onwe Ya n’enwe Nsogbu
Pung (ma ọ bụ Kong) nke ikuku nke aka Ya Enwere ike zoo ma ọ bụ gosipụta ya.
17. Aka Zoro ezo
Mee ka njikọta niile zoo ma mechie ya na tile ejiri.
18. Chi niile
Aka nke mejupụtara naanị Chis na enweghị nsọpụrụ.
19. Na-echekwa Tab
Jiri taịlị 4 nke taịlị enyere, na-ekwughị ya Kong (ya bụ, iji ya mee ihe ndị ọzọ). Kong zoro ezo ma ọ bụ nke ekpughere anaghị agụ dị ka Hoard Token.
20. Ngwakọta Ugboro abụọ agwakọtara
Aka ahụ nwere Pung abụọ ma ọ bụ Kong nke otu nọmba (mana o doro anya na uwe dị iche iche).
21. Ubezo Zoro Ezo
Aka ahụ nwere Pungs abụọ a na-ekpuchighị (ya bụ, ejighị ibe atụ atụfu ya). Kong zoro ezo abaghị uru Pung zoro ezo.
22. Zoro ezo Kong
Aka mejuputara taịl nile nke 4 d ị, nke n’enweghi nke tụfuru, nke ekwuputala na Kong. A na-atụgharị taịl nile na ihu ala.
23. All Dị Mfe
Aka na enweghị Terminal tokens ma ọ bụ Honor tokens. Mpekere niile dị na aka dị Mfe (ibe 2-8).
24. Enweghachi aka nke Terminals na Honors (All with Honors and / or Terminals)
Aka nke gunyere ma ọ dịkarịa ala otu tile ma ọ bụ otu nsọpụrụ na ngwakọta ọ bụla, gụnyere ụzọ.
25. Aka zoro ezo kpamkpam
A aka dechara taịl nile esitere na Mgbidi ahụ, gụnyere ụzọ.
26. Abụọ gosipụtara Kong
Aka ahụ nwere Kong abụọ gosipụtara.
27. Ikpeazụ Tab
Jiri taịled a tụfuru atụfu ya bụ nke ikpeazụ n’ime ụdị ahụ aka ekpe (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha adịworị)
tụfuo ma ọ bụ jiri ndị egwuregwu ndị ọzọ mee ihe na njikọta ekpughere (atọ Bamboo 4 taịlị, mechie na Bamboo 4 tile ikpeazụ). Enweghị ike ijikọ ya na Kong Robo.
28. Ugbo niile
Aka nke 4 Pung (ma ọ bụ Kong) guzobere na ụzọ ahụ.
29. Aka Semipura (Aka di ocha na nsopuru)
Aka nke nwere ibe sitere na otu n'ime ato ato, ya na Honors ibe.
30. Egwuregwu Egwuregwu atọ gwakọtara ọnụ
A aka nwere Chis atọ nke atọ suut, na onye na-amalite ibe nọ na nrịgo elu nkeji nke otu nzọụkwụ.
31. Ezinụlọ niile na Sọpụrụ
Aka guzobere site na njikọ nke akara nke ụdị 5 dị na egwuregwu ahụ pụtara. Atọ ndị a: Characters, Disks, Bamboos, tinyere Ifufe na Dragons.
32. Aka gosipụtara
Aka nke ejiri mejupụta nke ọ bụla na ibe ndị ọzọ egwuregwu tụfuru, gụnyere ụzọ. Enwere ike ijikọ ya na isi ihe Ichere.
33. Dragọn Abụọ
Aka ahụ nwere Pung (ma ọ bụ Kong) abụọ nke Dragons.
34. Abụọ zoro ezo Kong
Aka nke gunyere Kong abuo nke ekpughebeghi.
35. Ngwakọta agwakọta
A ogologo (taịl nile si 1 ka 9) nke Chis guzobere atọ suut. Enwere ike ijikọ ya na Todo Chi.
Aka mejupụtara jikọtara taịlị ejiri taịlị mee nke ọma (ya bụ, site na taịl ahụ ndị na-ele otu ihu ihu na ihu ihu: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 nke Disks, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 nke Bambúes na White Dragon). Isi ihe maka Ezumike Ezinyere.
37. Ugboro atọ Chi Mixed
A aka na atọ hà Chis, ma dị iche iche suut.
38. Ugbo na-agwakọta agwakọta Atọ
Aka ahụ nwere Pung ma ọ bụ Kong atọ, nke ọ bụla dị iche iche na ọnụ ọgụgụ karịrị Pung gara aga.
39. Aka Efu
Aka nke na-enweghị isi. Isi ihe maka Ifuru anaghị agụta akara a. A na-agbakwunye okooko ndị ahụ mgbe isi 8 merie.
Imechi, dịka ọmụmaatụ, na ịtụfu 3 Bamboo (ọ bụghị akụkụ ikpeazụ nke 3), na ịghara ịbụ ma ọ bụ aka zoro ezo ma ọ bụ aka ekpughere. N'ihi ya, emezuru na ọ bụghị All Chi, ma ọ bụ All Pung, ọ nweghị isi maka Chere, ma ọ bụ Pung of Terminals or Honors, ma ọ bụ maka Token Ikpeazụ, wdg.
40. Ikpeazụ Tab nke Wall
Mechie tile ikpeazụ na mgbidi ahụ. Enweghị ike ijikọ ya na Mechie Mgbidi ahụ.
41. Tụfuo Ikpeazụ Token nke Wall
Mechie na mkpofu nke taịlị ikpeazụ nke mgbidi ahụ.
42. Mechie na Extra Kong Token
Mechie akara aka ndi ewere mgbe enwetara Kong.
43. Kong Ohi
Mechie ihe akaebe ezuru ohi nye onye ọkpụkpọ nke o si na Pung gosipụtara na Kong pụta. Enweghị ike ijikọ ya na Aka Zoro ezo.
44. Ejiri Nsọpụrụ Okirikiri Kpoo Tokens
A aka mere site na taịlị ndị a: 5 ma ọ bụ 6 Sọpụrụ (ọ bụghị ejikọtara) yana mpaghara nke taịlị 8 ma ọ bụ 9 nwere ọnụ. Na akara ngosi 7 Sọpụrụ, akpọrọ egwuregwu a Sewn Tokens na Grand Honors. Aka ga-ezobe ya, agbanyeghị na ekwesighi ịzobe ya kpamkpam, ya bụ, a ga-adọba tile nwere tufuru ka ọ mechie. Enweghị ike ijikọ ya na Ezinụlọ niile ma ọ bụ Aka Zoro Ezo.
Egwuregwu pụrụ iche nke nwere ibe 1-4-7 nke otu uwe, 2-5-8 nke uwe ọzọ na 3-6-9 nke uwe nke atọ. Okwesighi ka aka zoo (o doro anya, enwere ike ịdọrọ ya na-enweghị ka ọ mechie maka njikọta nke anọ, ọ bụghị maka taịl ahụ a kpụrụ akpụ). Enwere ike ijikọ ya na Todo Chi.
46. ​​Onye dị 4
Aka nke nwere naanị ibe 6 ruo 9. Enweghi Mmetụta Aka Na-asọpụrụ.
47. Nke dị ala 4
Aka nke nwere naanị ibe 1 ruo 4. Enweghi Mmetụta Aka Na-asọpụrụ.
48. Oké Ifufe Atọ
Aka gụnyere 3 Wind Pung ma ọ bụ Kong.
49. Uzo di ocha
Aka mebere 1-9 ogologo nke ibe nke otu uwe, akpụ 3 consecutive Chis.
50. Oke Chis of 3 Ezinaụlọ
Aka nke nwere Chows 1-2-3 na 7-8-9 nke otu uwe, Chows 1-2-3 na 7-8-9 nke uwe ọzọ na ụzọ nke 5 nke uwe nke atọ fọdụrụ. Ihe maka Mixed Double Chi, Chis Terminal Chis, No Honors na All Chi abanyela.
51. Chis Dị Nkwụkwụ atọ Dị Ọcha
Aka mebere Chis atọ nke otu uwe ahụ, nke ọ bụla nwere mpempe mbido nke bido na ọnụọgụ ma ọ bụ abụọ karịrị nke mbido nke Chi gara aga, mana ọ bụghị ngwakọta nke ha abụọ (ya bụ, ma ọ bụ Chis atọ ahụ nwere mbido mbido oge nke otu ma ọ bụ Chis niile dị na nkeji abụọ).
52. Ha niile nwere 5
Aka nke nchikota obula tinyere 5 (tinyere uzo).
53. Ngwakọta Ugboro atọ
Aka nke nwere Pung atọ (ma ọ bụ Kong), mana nke ọ bụla dị iche iche.
54. Ugbo zoro ezo atọ
Aka nke gunyere Pungs atọ anaghị ekwupụta (zoro ezo Kong agụghị).
55. Ego asaa
Aka mebere uzo asaa. Ọ na-ejedebe na Nchere Dị Mfe mgbe niile. Enwere ike ịdọrọ taịl ahụ tufuru iji kwụsị egwu ahụ. Enweghị ike ijikọ ya na ụzọ abụọ (Pung of), Aka Zoro Ezo, ma ọ bụ Aka Dị Mfe. Enwere ike ijikọ ya na Ezinaụlọ niile, Aka Zoro Ezo zoro ezo, Token echekwara, Ọ dịghị asọpụrụ, All Dị Mfe, Ezinaụlọ 1 Na-efu, Ebumnobi niile, ma ọ bụ Honors niile.
56. Tokens ji oke ugwu wukwasi ya
Aka nke aka nke ọ bụla n'ime Honors asaa ahụ (na-enweghị nkwughachi) na taịl sitere na suut atọ ahụ nke mejupụtara taịlị asaa a kpụkọtara ahịhịa (ya bụ, ịnwe taịlị asaa ọ bụla n'ime itoolu na-eme aka nke taịlị a dakọtara: taịl 1- 4-7 nke otu uwe, 2-5-8 nke uwe ọzọ na 3-6-9 nke uwe nke atọ). Aka ga-ezo. Agaghị ejikọ ya na aka: Ezinaụlọ niile, Aka zoro ezo ma ọ bụ Chere Dị Mfe.
57. Ndị Ọgbọ Niile (Ọgbọ Nile nke Ọgbọ)
Aka guzobere Pung nke ọbụna taịl nile (gụnyere ụzọ). Ihe maka Egbe Niile, Enweghị Sọpụrụ na Ihe Dị Mfe Dịlarị. Enwere ike ijikọ ya na ezinụlọ na-adịghị ma ọ bụ aka dị ọcha.
58. Aka Dị Ọcha
Aka nke mejupụtara ibe nke otu uwe ahụ na enweghị nsọpụrụ. Isi ihe sitere na No Honors gụnyere.
59. icalzọ Chi atọ yiri onwe ha
Chis hà atọ na otu uwe. Enweghi ike ijikọ ya na aka Pung dị ọcha.
60. Ugboro atọ na-esochi ya zie ezie
Aka na Pung atọ (ma ọ bụ Kong) nke otu uwe ahụ, nke ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ karịrị otu karịa nke ikpeazụ. Enweghi ike ijikọ ya na Triple Chi Identical.
Aka nke ijikọ taịl nile nke taịl 7, 8 na 9 (tinyere ụzọ). Ihe edere maka enweghị nsọpụrụ gụnyere. Enwere ike ijikọ ya na Pung niile, Ezigbo Ezinụlọ ma ọ bụ Aka Dị Ọcha.
62. Central Tab
Aka nke ijikọ taịl nile nke taịl 4, 5 na 6 (tinyere ụzọ). Ihe edere maka enweghị nsọpụrụ gụnyere. Enwere ike ijikọ ya na Pung niile, Ezigbo Ezinụlọ ma ọ bụ Aka Dị Ọcha.
63. Obere Tabs
Aka nke ijikọ taịl nile nke taịl 1, 2 na 3 (tinyere ụzọ). Ihe edere maka enweghị nsọpụrụ gụnyere. Enwere ike ijikọ ya na Pung niile, Ezigbo Ezinụlọ ma ọ bụ Aka Dị Ọcha.
64. Anọ dị ọcha Chis
Aka nke Chis anọ nke otu uwe ahụ, nke ọ bụla na-amalite iberibe tụgharịrị otu ma ọ bụ nọmba abụọ gbasara mbido mbido nke Chi gara aga.
65. Kong atọ
Aka nke gụnyere Kong atọ. Enwere ike zoo ha ma ọ bụ gosi ha.
66. Nkwanye ugwu nile
Aka nke mejupụtara Terminals (counters 1 na 9) na Honors (Ifufe na Dragons). Enweghi isi ihe ozo ka akwadoro maka egwuru egwu nke Ifufe na Terminals. A na-etinye Points niile Pung, Terminal Pung, na Honors Pung. Enwere ike ijikọ ya na Aka dị Ọcha, Ezinụlọ Na-adịghị, Dragọn Abụọ, Dragọn atọ Dị Ukwuu, Dragọn atọ Dị Ukwuu, Ifufe Atọ, Obere Ifufe Anọ ma ọ bụ Nnukwu Ifufe Anọ.
67. Quadruple Chi Nkọwa
Aka mebere Chis nha anya nke otu uwe. A na-etinye Points maka Pure Staggered Pung, Hoard Token, na Pure Double Chi.
68. Anu Pure na-aga n’ihu
Aka nke gụnyere Pung anọ ma ọ bụ Kong nke otu uwe ahụ, nke na-ama jijiji.
70. Anọ Ikuku Ifufe
Aka nke gunyere Pung (ma obu Kong) nke Ifufe na uzo nke ikuku ozo. Enwere ike ijikọ ya na Ifufe Na-achịkwa na Ifufe Nke Onwe. Ejikọtara isi ihe ikuku atọ.
71. Littlemụ Dragọn atọ pere mpe
Aka nke gunyere Pung (ma obu Kong) nke Dragons, na uzo nke ozo Dragọn. A naghị agụkọ ihe n'otu Pung nke otu Dragons n'otu n'otu.
72. Nkwanye ugwu nile
Ejiri aka mee Honors (Ifufe na / ma obu Dragons). Enwere ike iji Pung ma ọ bụ Kong guzobe ya ma ọ bụ gosi ya. Enwere ike ijikọ ya na dragọn Pung. Ejikọtara Todo Pung isi.
73. Anọ zoro ezo Pung (Zoro Ezo)
Aka nke gunyere Pung anọ (ma obu Kong). Enweghi ike ijikọ ya na aka zoro ezo ma ọ bụ ihe ọ bụla.
74. Chis Oke Oke
Aka mebere Chis Lower (1-2-3), Chis elu abụọ (7-8-9) na ụzọ 5, ha niile bụ otu uwe. Ihe maka aka di ocha, uzo asaa, imechi Chows na uzo abuo di ocha.
75. Oke Osimiri ano
Aka nke Pung (ma obu Kong) guzobere nke ikuku ato. Enweghi ike ijikọ ya na Pung niile ma ọ bụ Oké Ifufe ma ọ bụ Ifufe Onwe Onye.
76. Oke Dragọn atọ
Aka nke Pung (ma obu Kong) nke Dragons 3 guzobere. Enweghi ike ijikọ ya na dragọn Pung.
77. Green niile
Aka mebere taịlị 2, 3, 4, 6, 8 achara na, nhọrọ, Green Dragons. Enwere ike ijikọ ya na Aka Dị Ọcha, Aka Dị Ọcha (ma ọ bụrụ na ejiri Dragons Green), Pzọ abụọ 7, Aka Zoro Ezo, Pung niile ma ọ bụ Ihe Dị Mfe.
78. Onuzo iteghete
Aka nke ibe 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 nke otu uwe ahụ, na-eme otu ụzọ na nke ọ bụla n'ime ha. Aka ga-ezo. Enweghi ike ijikọ ya na aka zoro ezo, aka dị ọcha, ma ọ bụ ọnụ na ugwu dị egwu. Enwere ike ijikọ ya na Aka Zoro ezo.
79. Anọ Kong
Aka ọ bụla nwere 4 Kong. Enwere ike zoo ha ma ọ bụ kpughee ha.
80. Uzo asaa di ocha
Aka nke asaa nke ibe nke otu uwe ahụ nke otu na-ebu otu. Enweghi ike ijiko ya na aka di ocha, aka zoro ezo kpamkpam ma obu ihe di mfe.
81. phanmụaka iri na atọ
Aka nke nwere taịl 1 na 9 maka Bamboos, 1 na 9 maka Disk, 1 na 9 maka Characters, na nke ọ bụla Asọpụrụ asaa. A na-eji ụzọ ọ bụla emee ụzọ ahụ. Enwere ike ịdọrọ taịl ahụ tufuru iji kwụsị egwu ahụ. Enweghi ike ijiko ya na aka di ocha, aka zoro ezo kpamkpam ma obu ihe di mfe.
Mmebi iwu na ahụhụ
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-emehie mgbe ọ na-ekwupụta Chi, Pung, Kong ma ọ bụ were akara nnọchi, ọ ga-efunahụ ikike iji merie egwuregwu ahụ (aka nwuru anwu), n'agbanyeghị na ịnwere ike igwu egwu, izu ohi, wdg.
Ndị na-egwu egwu enweghị ike ịrịọ ịtụfu wee gbanwee obi ha. Oge izizi a ga-amara gị ọkwa, nke ugboro abụọ ọ ga-abụ paara con Ihe 5 (a ga-akwụ onye ọkpụkpọ ọ bụla ụgwọ), nke atọ Ihe 10, nke anọ Ihe 20, were gabazie.
Imetụ tile tile tupu ọkpụkpọ gara aga tufuo bụ ihe arụ. Oge izizi a ga-amara gị ọkwa, nke ugboro abụọ ọ ga-abụ paara con Ihe 5 (a ga-akwụ onye ọkpụkpọ ọ bụla ụgwọ), nke atọ Ihe 10, nke anọ Ihe 20, were gabazie.
Ọ bụrụ na ahụghị akara ahụ, a ga-ahapụ ya ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na ahụrụ akara ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ agaghị enwe ike imeri egwuregwu ahụ (aka nwuru anwu), n'agbanyeghị na ịnwere ike igwu egwu, izu ohi, wdg.
Jụọ maka Pung na igbu oge
Rịọ akara aka maka Pung nwere ihe karịrị 3 sekọnd a na-ewere oge dị ka mmejọ. Oge izizi a ga-amara gị ọkwa, nke ugboro abụọ ọ ga-abụ paara con Ihe 5 (a ga-akwụ onye ọkpụkpọ ọ bụla ụgwọ), nke atọ Ihe 10, nke anọ Ihe 20, were gabazie.
Jgha Mahjong (Hugha Hu)
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ nwere erughị 8 isi ga-akwụ ụgwọ Ihe 10 nye onye ọkpụkpọ ọ bụla ma nwee aka nwuru anwu, ọ bụ ezie na ọ nwere ike na-egwu egwu, na-ezu ohi discards, wdg.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ anaghị emezu ihe a chọrọ ime Mahjong na mkpofu (ị nwere ihe karịrị taịl 14 ma ọ bụ ihe na-erughị 14, mehie na tile na-emechi, wdg), ị ga-akwụ ụgwọ Ihe 20 nye onye ọkpụkpọ ọ bụla ma nwee aka nwuru anwu, ọ bụ ezie na ọ nwere ike na-egwu egwu, na-ezu ohi discards, wdg.
Ọzọkwa, niile ibe gosiri site na ikwuputa nke Mahjong ugha ga-atụfu na ndị na-esonụ ọkpụkpọ amama.
E gosipụtara Taabụ
Ihe niile taabụ egosiri site na onye na-egwu egwu (ọ dara mgbe o zuru ya na mgbidi, tụba ya n'etiti ibe ya n'aka, wdg) ga-atụfu na uzo ọkpụkpọ nke ọzọ.
Na ihe omume na onye ọkpụkpọ gosi ibe gi niile mgbe onye ọkpụkpọ ọzọ kwupụtara Mahjong ọ na-eme ihe ọjọọ. Ọ bụrụ n'ikpeazụ onye ọkpụkpọ nke kwupụtara Mahjong merie, ihe ọkpụkpọ nke gosiri ibe ya ga- dụrụ ọdụ.¿ Ọ bụ na ọkpụkpọ ọkpụkpọ ọzọ anaghị emeri? ga-atụfu ibe ndị egosiri otu otu.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ekpughe faịlụ ọzọ, ga-akwụrịrị onye ọkpụkpọ merụrụ ahụ n'etiti 5-60 isi kpebiri onye nchịkwa (onye ga-ekpebi ma ọ ga-aga n'ihu egwuregwu ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị).
Nọmba Token na-ezighi ezi
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nwere ihe na-erughị taịl 13 ma ọ bụ karịa 13 n'etiti etiti, ha nwere aka nwuru anwu, ọ bụ ezie na ọ nwere ike na-egwu egwu, na-ezu ohi discards, wdg.
Ihe ojoro intaneti kacha ewu ewu